आइफोन ७ का मोडलहरुको लजिक बोर्डमा समस्या देखियो, अपडेट गरेर समाधान हुदैन – एप्पल – Nepali Tech Blog
Nepali Tech Blog
Just another nepali tech blog
Home → प्रविधि खबर
आइफोन ७ का मोडलहरुको लजिक बोर्डमा समस्या देखियो, अपडेट गरेर समाधान हुदैन – एप्पल
In: प्रविधि खबर|Last Updated: February 5, 2018
आइफोन ७ का मोडलहरुमा समस्या भए एप्पलले सित्तैमा बनाइदिने भएको छ । तपाई भन्नुहोला यो के नयाँ खबर भयो र ? यसै पनि आइफोन लगायतका एप्पलका उत्पादनहरुमा भएका गडबडीहरु एप्पलको आधिकारिक मर्मत स्थानहरुबाट सित्तैमा बनाउँन सकिन्छ । हो तर त्यस्तो मर्मतका केहि शर्तहरु हुन्छ ।
तपाईको मोबाइलमा आएका सफ्टवेयरका समस्याहरु सित्तैमा बनाइन्छन्, हार्डवेयरमा हुने गडबडीको लागि होइन ।
यसैले आइफोन ७ का मोडलहरुमा समस्या भए एप्पलले सित्तैमा बनाइदिने कुराले आइफोन ७ का मोडलहरु प्रयोग गर्नेहरुका लागि खुसीको खबर हुन सक्छ । अब आइफोन ७ मोडलमा देखिएको एउटा खराबी हटाउँन एप्पल स्वयम सहयोगमा आउँने भएको छ ।
तपाई यदि आइफोन ७ मोडल चलाउँनु हुन्छ र तपाईको मोबाइलले अनावश्यकरुपमा बेला बेला नो सर्भिस ‘No Service’ देखाउँछ भने यो तपाईको मोबाइलको समस्या होइन । रिपोर्टहरुले बताए अनुसार आइफोन ७ का मोडलहरुमा यो समस्या देखिएको एप्पलको उत्पादनकै समस्या हो । यो कुरालाई एप्पलले पनि स्विकार गरेको छ ।
केहि समय देखि आइफोन ७ मोडलमा नो सर्भिस ‘No Service’ देखाउँने समस्याले धेरै प्रयोगकर्तालाई वाक्क बनाएको छ । एकदमै राम्रो नेटवर्क भएको ठाउँमा पनि यसले मोबाइल नेटवर्क टिप्दैन र नो सर्भिस ‘No Service’ देखाउँछ ।
एप्पलले बताएको छ कि केहि प्रतिशत आइफोन ७ मोडलमा यस्तो समस्या देखिएको छ । र, यस्तो समस्या देखिएका फोनहरुका लागि निशुल्क मर्मत गरिनेछ ।
सफ्टवेयरमा समस्या होइन – एप्पल
खराब समाचार यो छ कि आइफोन ७ मोडलमा देखिएको समस्या सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित छैन । सफ्टवेयर अपडेट गरेर यो समस्या सुल्झिदैन । एप्पलले भनेको छ यो समस्या लोजिक बोर्डको खराबी हो र यसलाई भौतिकरुपमै मर्मतको आवश्यकता पर्दछ ।
एप्पलका अनुसार सेप्टेम्बर २०१६ देखि फेब्रअरी २०१८ सम्म निर्मित फोनसेटहरुमा यो समस्या देखिएको छ ।
नमस्ते, म गणेश कार्की । म बितेका केहि बर्षदेखि नियमित रुपमा ब्लग लेख्दै आएको छु । कम्प्युटरको सामान्य ज्ञान बाहेक थप जानकारी नभएको कारण मैले सिकाइ अवधिमा सानो सानो कुरामा पनि निकै दुख ब्योहोरेको छु । यो क्रम जारी छ अझै । यहाँ आफुले जानेका र सिकेका सकेसम्म धेरै कुराहरु समेट्नेछु । प्राविधिक ज्ञान नभएको म जस्तै अर्को सिकारुले मैले झैँ स-साना कुरामा अनावश्यक दुख भोग्नु नपरोस्, अंग्रेजी नजानेकै कारण सूचना प्रबिधिबाट कोही नेपाली ‘यो युग’बाट टाढा बस्नु नपरोस् । मेरो इच्छा यति हो । मलाई फेसबुकमा, ट्विटरमा भेट्न सक्नुहुनेछ । मेरो बारेमा थप जानकारी यहाँ पाउँनु हुनेछ ।
ganesh karki – who has written 37 posts on Nepali Tech Blog.
जानकारी फैलाउँन सहयोग गर्नुहोस् :
जति बेलै मान्छे फेसबुकमा झुन्डिए भन्दै ल्यायो फेसबुकले यस्तो परिवर्तन, तपाईकोमा आइपुग्यो ?
यो पनि पढ्न लायक छ है!!
युट्युबले नियम फेर्यो : अब के होला ?
ठुला कम्पनीहरु गुगलको विज्ञापन छोड्दै
सबैभन्दा राम्रो दरमा आफ्नै कम्प्युटरबाट नेपालमा रकम पठाउँनुहोस्
जान्नुहोस् – फेसबुकको पोस्टहरु पछि हेर्ने गरि सेभ गर्ने तरिका
वाइफाइको एलर्जी भएपछि सरकारले दियो क्षतिपुर्ति !
फेसबुकको फोटो वास्तविक हो कि झुटो, कसरी थाहा पाउँने ?
अफर तथा छुटहरु
डोमेन रजिस्टर गर्न - गोड्याडी डोमेन 0.९९ डलर प्रतिबर्ष (Expire on Sep 15)
सस्तोमस्तो मज्जाको वर्डप्रेस थिम - ५० डलरमा ३० वटा
तपाई आफ्नो मोबाइल दिनमा कति पटक छुनु हुन्छ ? कतै मोबाइलको कुलतमा त हुनुहुन्न ? जान्नुहोस्
यसो गर्दा नेपालीमा बोलेका कुरा कम्प्युटरले टाइप गर्छ, पैसा नपर्ने र नयाँ सफ्टवेयर राख्न नपर्ने तरिका
मोबाइलमा स्क्रिन अफ गरेर वा ब्याकग्राउन्डमा युट्युब चलाउँन के गर्ने ?
© 2016 Nepali Tech Blog · Created by Nepali Tech Blog